Shan fasiraad oo laga bixiyay jaakad-ka ay xiratay Melania Trump - BBC News Somali
Baraha iyo bulshada iyo warbaahinta qeybaheeda kala duwan ayaa waxaa durbaba qabsaday fasiraado iyo eedeymo kala duwan oo ku wajahan jaakad fariini ku qorantahay oo ay xiratay xaaska madaxweynaha Maraykanka, haweenayda lagu magacaabo Melania Trump.
Waxay noqotay wax aad loola yaabo in xaaska ay soo xiratay jaakad ay samaysay shirkadda Zara oo ay ku qoranyihiin erayada "Wax iga quseeya ma jiraan, adigana?", taas oo joogta qiimo dhan $39 doolar.
Waxa la sheegay in Ms Trump ay jaakadan xiratay xili ay kusii jeedday goob lagu hayay carruur laga soocay waalidkooda oo sharci daro ku galayay Maraykankan, kuwaas oo xabsi la dhigay.
Markii ay carruurta u tagtay waa ay iska siibtay, balse dib ayay u xiratay inkasta oo muddo saacado ah ay warbaahinta tabinaysay jaakadda.
Trump oo dad badan kaga qososhiiyay kaftan
Haddaba fariintan maxay ka dhigantahay
1. Waa iska jaakad caadi ah
Waa aragtida ay bixisay afhayeen u hadashay Melania oo lagu magacaabo Stephanie Grisham, iyada oo tiri "Waa iska jaakad caadi ah, mana jirto fariin qarsoon oo ku hoos duugan".
Balse taasi sax ma tahay iyada oo la ogyahay in Melania ay horey u ahayd dadka dharka xayaysiiya, islamarkaasna ay adagtahay in ay iska xirato sheey aysan ujeeddo usoo xulanin, gaar ahaan gashi ay fariimo ku qoranyihiin.
Jaakadkan waxaa la sheegay in uu qeyb ka ahaa dhar ay soo gadatay 2016-kii, sidaas darteed looma qaadan karo dhar inta markaas lasoo gatay, la'iska xirtay.
2. Fariin loo dirayay 'Warbaahinta Been Abuurka Ah'
Seygeeda, Donald Trump ayaa sheegay wax ka duwan wixii ay sheegtay gabadha afhayeenka ah, waxa uu boggiisa Twitter-ka kusoo qoray in fariintan loo dirayo warbaahinta oo uu isaga u yaqaano 'Warbaahinta Been Abuurka Ah'.
Dhawaan markii ay muddo ka maqnayd fagaarayaasha, waxaa jirtay hadal heyn ku saabsan xaaladeeda caafimaad iyo waliba xiriirka kala dhaxeeya ninkeeda xilli ay socotay fadeexadii Trump ee la xiriirtay haweenaydii uu 'la seexday'.
3. Fariin ku socotay Seeygeeda
Melani Trump ayaa horey u sheegtay in aysan u dulqaadan karin in la kala sooco carruurta iyo waalidkooda, fikradaas oo ay kaga duwantahay seeygeeda.
Afhayeenkeeda ayaa sheegtay in go'aanka ay Melania ku booqatay goobta lagu hayo carruurta ay ahayd 'fikradeeda 100%'.
Ma ahan markii ugu horeysay oo ay wax samayso iskeeda. Markii ay Aqalka Cad tagtay waxa ay biloowday barnaamij ay kula dagaalamayso in dadka lagu waxyeeleeyo xagga internet-ka, balse dad badan ayaa taas u arkay munaafaqnimo, iyaga oo farta ku fiiqay in seeygeeda uu yahay nin dadka ku maaga internet-ka.
Waxaa macquul ah in fariintan ay ula dan lahayd ninkeeda, una sheegaysay in aysan dan iyo xaajo ka lahayn siyaasadihiisa.
4. Ma isbadal ayay samaysay?
Waxaa laga yaabaa in ay wax ka badashay dharkii qaaliga ahaa ee ay xiran jirtay, iyada oo horey loogu eedeeyay in ay xirat shaar qiimihiisu dhanyahay $1,380.
Image caption Shaar qaali ah iyo jaakad qaali ah
5. Xulasho 'aanan la cafin karin'?
Dad badan ayaa u turjuntay in fariinta meesha ku qoran ay ku socoto dadka walwalka ka qaba carruuraha waalidkooda laga qaatay, iyada oo xildhibaan ka tirsan Aqalka Congress-ka David Jolly uu sheegay in xulashadeeda dharka ay tahay 'mid aanan la cafin karin'.
Dadka badan oo kuwa caanka ah ayaa dhaleeceeyay gashiga ay qaadatay Melania Trump xilli ay socotay arrin xasaasi ah.
Shirkad dharka soo saarta ayaa markiiba soo saartay jaakado cusub oo ay ku qoranyihiin erayada ah "Runtii dan waan la leeyahay, adigana miyaadan sidaas ahayn?".
Jaakadahan cusub ayaa markiiba la dhamaystay, iyada oo ay xitaa soo baxeen waxyaabo kale oo erayadan ku qoranyihiin.